न्यूजिल्याण्डको अकल्याण्डमा अनेसासको गठन – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार ०३:३६ English
न्यूजिल्याण्डको अकल्याण्डमा अनेसासको गठन
न्यूजिल्याण्ड । आज मार्च १८, २०१६ को दिन न्यूजिल्याण्डको अकल्याण्ड निवासी नेपाली भाषा प्रेमी साहित्यकारहरूले अनेसासको च्याप्टरको कार्य कारिणी समितिको चयन गरेका छन् । पशुपति कर्माचार्यको अध्यक्षतामा हालै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको काकासको गठन भएको हो ।
सो कमिटीमा उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष क्रमसः लक्षण सुन्दर सैजू, यज्ञराज पन्त. मीना पौडेल र सजना थापा रहनु भएको छ। सदस्यहरूमा पंकज श्रेष्ठ, पदम बन्जाडे र बलराम खनाल रहनु भएको छ। कमिटीले सलाहकारहरूमा उद्धव अधिकारी (अध्यक्ष, न्युजिल्याण्ड नेपाल सोसाइटी), श्रीधर बस्नेत (भू.पू. अध्यक्ष,न्युजिल्यान्ड नेपाल एसोसिएसन) र कमल श्रेष्ठ (अध्यक्ष, नेप्पलिज कल्चरल सेन्टर न्युजिल्याण्ड, भू.पू.अध्यक्ष, न्युजिल्याण्ड नेपाल सोसाइटी)लाई मनोनित गरेको छ । सुमन राज ढुंगेल तथा प्रियंगु ढुंगेललाई भेलाले स्थान उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको थियो ।
अनेसासका केन्द्रिय संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुबेदीको आतिथ्यमा र अकल्याण्ड नेपाली सोसाइटीका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीको अध्यक्षतामा सो भेला भएको थियो । विशेष अतिथिको रुपमा न्यूजिल्याण्ड एन आर एन ए. का अध्यक्ष बाबुराजा महर्जन लगायतले मन्तव्य दिनु भएको थियो । कवि गोष्ठी पनि भएको थियो त्यसमा मीना पौडेल, युरिका थापा, अचल अधिकारी, नन्दा देवी सुबेदी, सविना रंजीत्कार, प्रियाँगु ढुंगेल,सबिता भण्डारी, दीपक डंगोल, प्रकाश रंजितकार, श्रीधर बस्न्यात, दिनेश आचार्य, सरोज कर्माचार्य, डा अच्युत अर्याल, सुमन ढुंगेल, रंजन पन्त, सन्तोष भण्डारी, उद्धव अधिकारी, पशुपति कर्माचार्य, होमनाथ सुबेदी, लक्ष्मण सुन्दर सैंजू, बाबुराजा महर्जन, साजना थापा आदिको सहभागिता रहेको थियो।
सो उपस्थित भेलाले भानुजयन्ती, देवकोटा जयन्ती मनाउने र त्रैमासिक कोठे कवि गोष्ठी संचालन पनि गर्ने निर्णय गरेको छ । डायस्पोरामा नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको सरक्षण सम्बर्धन गर्नु यसको उद्देश्य रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको च्याप्टर गठनले यस क्षेत्रमा नेपाली भाषा तथा साहित्यको बिकासमा अरु थप योगदान पुग्ने बिश्वास लिइएको छ ।
६ चैत्र २०७२, शनिबार ०७:०२ मा प्रकाशित